Hamro Yatra | » अलमुताइरीको नेतृत्वमा रचिएला नेपाली फुटबलमा इतिहास? अलमुताइरीको नेतृत्वमा रचिएला नेपाली फुटबलमा इतिहास? – Hamro Yatra
> अलमुताइरीको नेतृत्वमा रचिएला नेपाली फुटबलमा इतिहास?
अलमुताइरीको नेतृत्वमा रचिएला नेपाली फुटबलमा इतिहास?
काठमाडौं, असोज १४ । शुक्रबारदेखि दक्षिण एसियाली देशहरूको फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनसिप सुरू हुँदैछ। गत चैतमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षकमा नियुक्त भएपछि अब्दुल्लाह अलमुताइरीले प्रमुख लक्ष्य साफ च्याम्पियनसिप जित्ने बताएका थिए।
साफ जित्नका लागि नेपाली टिम सक्षम रहेको उनको भनाइ थियो। त्यसयता अलमुताइरीले नेपाली फुटबल टिममा धेरै परिवर्तन गरिसकेका छन्। टिममा युवा खेलाडीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। विपक्षीविरूद्ध आक्रमण खेल्ने रणनीतिमा नेपाली टिमलाई अभ्यस्त बनाउन खोजिरहेका छन्।
अलमुताइरी प्रशिक्षक नियुक्त भएयता नेपालले ७ खेल खेलिसकेको छ। तीमध्ये पाँच खेलमा पराजित भएको छ। एक जित निकालेको नेपाली टिमले एक खेलमा बराबरी खेलेको छ। अलमुताइरीको प्रशिक्षणमा नेपालले आफूभन्दा बलिया टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाएको छ। नेपालले ७ खेलमा २२ गोल खाएको छ भने ८ गोल गर्न सकेको छ। खेलेका ७ मध्ये नेपालले एक खेलमा मात्र गोल खाएको छैन। यस्तै नेपालले ७ मध्ये २ खेलमा मात्र गोल गर्न सकेको छैन।
अलमुताइरीको प्रशिक्षणमा नेपालको नतिजा
नेपाल २ – ६ इराक – मैत्रीपूर्ण खेल
नेपाल २ – ० चाइनिज ताइपेई – विश्वकप छनोट
नेपाल ० – ३ जोर्डन – विश्वकप छनोट
नेपाल ० – ३ अस्ट्रेलिया – विश्वकप छनोट
नेपाल १ – १ भारत – मैत्रीपूर्ण खेल
नेपाल १- २ भारत – मैत्रीपूर्ण खेल
नेपाल २- ७ ओमान – मैत्रीपूर्ण खेल
६ महिनामा नेपाली टिममा परिवर्तन गरेका अलमुताइरीसामू अब नेपाली फुटबलमा इतिहास बनाउने अवसर छ। पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्नु नेपाली टिमका लागि सहज भने पक्का छैन। सन् १९९३ मा पाकिस्तानको लाहोरमा पहिलो संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप भएको थियो। त्यसयता साफका १२ संस्करण सम्पन्न भइसकेका छन्।
१२ संस्करणमध्ये भारतले ७ पटक उपाधि जितेको छ। माल्दिभ्सले दुई पटक उपाधि जित्दा अफगानिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशले एक-एक उपाधि जितेका छन्। सन् २००५ देखि साफ खेलेको आफगानिस्तानले २०१५ मा अन्तिम पटक साफ खेलेको थियो। अफगानिस्तानले मध्य एसिया फुटबल महासंघमा आबद्ध हुन साफ छाडेको थियो।
नेपाल, पाकिस्तान र भुटानले भने उपाधि जित्न सकेका छैनन्। तीनै टिम अहिलेसम्म साफको फाइनलमा समेत पुग्न सकेका छैनन्। साफको १३औं संस्करण भोलिदेखि माल्दिभ्समा सुरू हुँदैछ। प्रतियोगितामा उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ कतारमा १५ दिन अभ्यास गरेपछि नेपाली टिम तीन दिनअघि माल्दिभ्स पुगिसकेको छ।
त्यसअघि पोखरामा अभ्यास गरेपछि नेपालले भारतसँग दशरथ रंगशालामा दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। पहिलो खेल १-१ को बराबरी खेलेको नेपाल दोस्रो खेलमा २-१ ले पराजित भएको थियो। त्यसपछि नेपाली टिम अभ्यासका लागि कतार पुगेको थियो। हुन त प्रत्येक संस्करणको साफमा नेपालको लक्ष्य उपाधि जित्ने नै हुन्छ। तर मैदानमा नेपाल सफल हुन सकिरहेको छैन।
साफको इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल भुटानपछिको कमजोर टिम हो। किनभने नेपाल १२ संस्करणमा एक पटक तेस्रो (१९९३) हुँदा तीन पटक सेमिफाइनलबाट (२०११, २०१३, २०१८) बाहिरिएको छ। त्यसबाहेक ८ संस्करणमा नेपालको चुनौती समूह चरणमै समाप्त भएको छ।
नेपालले १२ संस्करणको साफमा ३८ खेल खेलेको छ। जसमा नेपाल ११ खेलमा विजयी भएको छ। ६ खेलमा बराबरी खेलेको नेपाल २१ खेलमा पराजित भएको छ। नेपालले ४४ गोल गर्दा ५६ गोल खाएको छ। यो तथ्यांकमा नेपाली टिम अफगानिस्तानसहित आठ टिममध्ये सातौं स्थानमा छ।
खराब इतिहास बोकेको नेपाली टिमले यस संस्करणको साफको पहिलो खेल भोलि शुक्रबार आयोजक माल्दिभ्ससँग खेल्दैछ। पहिलो खेल त्यो पनि आयोजकसँग खेल्नु नेपालका लागि दबाब हुने पक्का छ। भोलिको खेलमा सकारात्मक नतिजा निकाल्न सके नेपाललाई ठूलो राहत हुनेछ।
यसपटकको साफमा नेपालसहित भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र आयोजक माल्दिभ्स गरी पाँच टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। भुटानले कोभिड-१९ को कारणले सहभागिता जनाएको छैन। पाकिस्तानले आन्तरिक विवादका कारण पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्ने गरेको छैन। पाँच टिमले एक आपसमा खेलेपछि शीर्ष दुई टिमबीच उपाधि भिडन्त हुनेछ।
नेपाल भर्सेस माल्दिभ्स – असोज १५ गते – राति ९:४५ बजे
नेपाल भर्सेस श्रीलंका – असोज १८ गते – राति ९:४५ बजे
गोलकिपर : किरणकुमार लिम्बु (कप्तान), दीप कार्की, विशाल श्रेष्ठ
डिफेन्डर : दिनेश राजवंशी, अनन्त तामाङ, गौतम श्रेष्ठ, सुमन अर्याल, रोहित चन्द
मिडफिल्डर : विशाल राई, सुनील बल, सुरज ज्यु ठकुरी, नितिन थापा, पुजन उपरकोटी, तेज तामाङ, सुजल श्रेष्ठ, सन्तोष तामाङ, आयुष घलान, कमल थापा
फरवार्ड : नवयुग श्रेष्ठ, मनिष डाँगी, अन्जन विष्ट, सुमन लामा, आसिस लामा